कूटनीतिक सेवाबाहिरबाट एकाएक उदाएका कार्की आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल टुंगिएर पनि राजनीतिक निगाहमा केही महिना थमौती पाएर बसिरहेका प्रतिनिधि पात्र थिए ।
अवैतनिक दूत, महावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूत, सद्भावना दूत, पर्यटन दूत आदिमाझ भेटिए- अमेरिकास्थित साँच्चिकै दुई राजदूत अर्जुन कार्की (वासिङ्टन डीसी) र अमृतकुमार राई (स्थायी प्रतिनिधि, न्युयोर्क) ।
कूटनीतिक सेवाबाहिरबाट एकाएक उदाएका कार्की आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल टुंगिएर पनि राजनीतिक निगाहमा केही महिना थमौती पाएर बसिरहेका प्रतिनिधि पात्र थिए । राई भने कूटनीतिक सेवा भए पनि उस्तै राजनीतिक छत्रछायामा पालोक्रम मिचेर राष्ट्रसंघमा स्थायी दूत बनेर १० महिनाअघि मात्रै न्युयोर्क उत्रिएका थिए ।
कार्की डीसीमा ८० करोडको राजदूत निवास किनेर विवादमा आएका र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी सहयोग नेपाल ल्याउन माध्यम बनेर स्याबासी पाएका पात्र थिए । राई भने सनातनी राष्ट्रसंघीय कर्मकाण्डमै कहीँ-कतै हराइरहेका पात्र थिए ।
केही अपारदर्शी कर्म र नचाहिँदो सरोकारमा जोडिएर अमेरिकाका धेरै पत्रकारले कार्कीलाई प्रश्न सोध्ने गरेका रहेछन्- भूकम्पमा उठाएको पैसा खोइ ? ८० करोडको निवास किन चाहियो ? त्यो निवास किनेको लेखापरीक्षण गराउन किन महालेखा परीक्षकलाई नै बोलाउनुपर्‍यो ? दूतावासका गतिविधि किन पारदर्शी हुँदैनन् ? आदि-इत्यादि । अनेकानेक यी प्रश्नको जवाफ दिइरहनुको दुःख आफ्नै होला । त्यही भएर यस्ता प्रश्न गर्ने पत्रकार, जिज्ञासुलाई राजदूत कार्कीले फेसबुक, ट्वीटर सबैतिर 'ब्लक' हान्ने रहेछन् । न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी ।
यही मेसोमा न्युयोर्कको स्थायी प्रतिनिधि कार्यालयमा भेटिएका राजदूत कार्कीलाई एमसीसीको अवरुद्ध स्थिति, डीसी दूतावासमा उठेका अपारदर्शी कुराबारे जिज्ञासा राख्ने अवसर मिलेजस्तै भयो । तर कार्कीको उस्तै दुःखको जवाफ सुनियो- मैले मेरा विभागीय मन्त्री र मन्त्रालयलाई सबै जवाफ दिने हो । तपाइर्ंलाई किन दिने ? मेरो जवाफ मन्त्रीलाई सोध्नुस् । यसरी एकै निमेषमा राजदूतको दुःख थाहा पाइयो ।
ड्रयागन एयरलाइन्स हुँदै हङकङ लाग्यौँ, जहाँ ट्रान्जिटै थियो १२ घन्टाको । ट्रान्जिट के भन्नु, दुःख, हैरानी, कुन्ठा र बेचैनी बिसाउने चौतारी ।
"लौ है, मामु-बाबा जसरी नि आइस्योस्, यहाँ नातिनातिनाले खुबै मिस गरेका छन् भनेर यसपाला पनि बोलाए । अनि बाटा लाग्यौँ," नेपालगन्जका उमेरमा ६० नाघेका एक जोडी श्रेष्ठ थरका बाआमाको कुरा सुरु भयो ।
"यत्राको मिस गर्छन् ? ती छोराबुहारीले काममा जान, छुट्टीमा बाहिर घुम्न पाएनन् अनि हामीलाई नातिनातिना हेर्न बोलाएका हुन् । कुरा नबुझेको हो र ?" ३ वर्षअघि मात्रै तेलभिसामा अमेरिका आएर नातिनी हुर्काएर गएकी हजुरआमाले तुरुन्तै कुरा काटिन् ।
"हो नि, मेरो नि तेलभिसै हो । अर्को साता छोरीका सन्तान हुँदै छन्," अर्की भोजपुर मूल घर भएकी राई आमाले थपिन्, "मलाई काठमाडौँको अमेरिकी दूतावासमा बस्नेले पनि आमै तपाईंको तेलभिसा रहेछ भनेको थियो । होला त नि भनेर हिँडेकी ।"
"हामी सबैको अमेरिका जाने भाग्य भनेको कि त छोराछोरीलाई डीभी परेर हो, कि हामी तेलभिसामा छानिएरै हो," झापा दमकका एक पूर्वशिक्षक पनि यही चक्करमा मेरिल्यान्ड हिँडेका रहेछन्, "हाम्रा लागि अमि्रका भनेको बर्मा गयो कर्मजस्तै न हो, उही छोराबुहारीलाई भात पकाउने, नातिनातिना हेर्ने अनि ६ महिनामा यही बाटो घर र्फकने । यही हो, अलिक ठूलो पिलेन चढियो भन्ने मात्रै ।"
कठै ! मेरा भानिज
कोही जहानले भरेको डीभी परेपछि र कोही जहानको जोडबल चलेपछि ४ वर्षअघि अमेरिका पुगेका भानिजद्वय सुवास (आँगन) र प्रमोद (लारुम्बा) यसपाला बाल्टिमोरमा भेटिए । उनीहरुले अमेरिकाको घन्टे-जीवन र किस्ताबन्दी सपनाबारे हाँसीखुसी बताए । दुई भानिजका गाडी, घर, रसिलो जीवन देखेर उल्का लाग्यो तर अपराह्नमा यसो कुना पसेर दुःखसुखका बात मार्न थालेपछि तिनका गह भरिन्थे ।
एक साँझ भानिजहरु आ-आफ्ना घन्टा कटाएर सपिङ मार्टमा आइपुगे । अनि, भाइबर खोलेर सूची टिप्न थाले- आइफोन सेभेन प्लस ३ वटा, चार्जर २ वटा, माछाको तेल ५ बट्टा, खैनीको अम्मल छुटाउने निकोटिन गम २ प्याकेट, लार्ज साइज होजियारी २ वटा, सुगर फ्री चकलेट ३ प्याकेट, बिल्लो द बेल्ट जेल, लोरियल क्रिम ३ थान आदि-इत्यादि ।
हैट्, मेरा भानिजद्वयको दुःखको सूची अझ लम्बिँदै थियो । बरु अमेरिकी किस्ताबन्दी जीवन धेरै सजिलो हो कि ? झन्डै हतास मुद्रामा पुगेका भानिजमध्ये एकलाई फेरि मेसेज आयो, भद्रपुरबाट लीलाप्रसाद भिनाजुको- 'ए साला केटा, मलाई नाकको रौँ उखेल्ने मिसिन जसरी नि पठाइदे है । रौँ बढेर मुस्किलै भो...।'
मेरा अमेरिकी भानिजको साह्रै दुःख लाग्ने दुःख !